बिहेमै घट्यो यस्तो घ,टना, जन्ती आएका साथी मा’रिए मण्डप पछाडी ११ बर्षे बालिकालाइ करणी, ५ जना प,क्राउ (भिडियो सहित) हेर्नुहोस् !
टाउको र कुम देखिएको अवस्थामा भेटिएको शव स’डेको थियो । धजेन्द्रसँगै वैशाख १४ गतेदेखि देवीस्थानका अन्य चार युवा सम्पर्कविहीन थिए जो अहिले पक्राउ परेका छन् । मृतकका दाजु तिलक पुनले प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान र संलग्नको खोजी थालिएको थियो ।
देवीस्थानमा एकै दिन दुई वटा अ पराध भएका छन् । वैशाख १४ गते त्यहाँ छिमेकमा विवाह थियो । कर णीको शिकार बनेकी बालिका विवाहमा गएकी थिइन् । दुवै घटनाका बारेमा आइतबार प्रहरीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो । (भिडियो) हेर्नुस् !
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार ०१:४५0Minutes 207 Views